Mepụta maapụ dị ike na Excel n'ihe na-erughị otu elekere!
Edere site Tranquillus | Jan 19, 2022 | Na weebụ
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi ahazi data gị na a map mmekọrịta, site n'enyemaka nkeExcel na ngwa maapụ 3D!
Kwadebe data gị, hazie maapụ gị, mepụta ihe ndapụta… wee bupụ ọrụ gị na HD!
A ga-eduzi usoro ọmụmụ ahụ dum site na ikpe bara uru sitere na ezigbo data, ya bụ ihe mberede okporo ụzọ New York.
Nyere ndị uwe ojii aka ịghọta nke ọma ebe ndị nwere nnukwu ihe ize ndụ nke ihe mberede site n'inye ha a maapụ 3D mmekọrịta !
Kedu ihe bụ maapụ 3D?
Site na maapụ 3D, ị nwere ike chepụta data mpaghara na oge na ụwa 3D ma ọ bụ maapụ omenala, lelee ya ka oge na-aga, wee mepụta njegharị eduzi nke ị nwere ike ịkọrọ ndị ọzọ. Ị nwere ike iji 3D Maps ka:
Chee echiche ihe karịrị otu nde ahịrị data n'anya na maapụ Microsoft Bing n'ụdị 3D site na tebụl Excel ma ọ bụ ụdị data dị na Excel.
Nweta nghọta site na ilele data gị na oghere mpaghara yana ịhụ oge na ụbọchị nke data na-agbanwe ka oge na-aga.
Were nseta ihuenyo wee mepụta cinematics, na-aga site na ihe ngosi vidiyo ị nwere ike kesaa nnukwu oge, na-adọta ndị na-ege ntị dị ka ọ dịtụbeghị mbụ. Ma ọ bụ bupụ njegharị eduzi na vidiyo wee kesaa ha otu ahụ.
Mepụta maapụ dị ike na Excel n'ihe na-erughị otu elekere! January 19th, 2022Tranquillus
GỤỌ Nkọwa ọkachamara ọkachamara: ụlọ gbasaa ime ya!
gara agaMepụta Ultra Professional Excel Dashboard!
-esonụNyocha nha urughuru site na Excel
Ọrụ n'ike mmụọ nsọ
Simulation ahụike: ọ dịịrị gị!
Bụrụ onye nyocha data site na ogo mahadum